Gabadh u tartantay Boqoradda Quruxda oo arrin naxdin leh ay ku dhacday - Muraayad
Gabadh u tartantay Boqoradda Quruxda oo arrin naxdin leh ay ku dhacday
Haweeney u dhalatay dalka Ruushka, oo mar u tartantay Boqoradda Quruxda ayaa arrin nasiib darro ah kala kulantay qalliin lagu sameeyay.
Qalliinkan, oo ahaa kan lagu sameeyo wajiga si looga bixiyo laalaabka ay da’da keentay, ayaa sababay in gabadhan, oo lagu magacaabo Yulia Tarasevich, ay awoodi wayso in ay indhaha isku qabato ama ay dhoolla caddeyso.
Lacag ka badan $3,000 oo doolar ayaa ku baxday qalliinkaas burburiyay nolosha haweeneydan oo 43 jir ah.
“Waxaan ula tagay waji qurux badan, oo caafimaad leh. Waxaan rabay in la ii giijiyo wajiga oo ay da’da ka muuqatay oo kaliya balse arrintan ayaa dhacday”, ayay tidhi mar ay ka hadleysay muuqaal lagu baahiyay wargeyska Daily Mail.
Labo dhakhtar oo qalliinkan sameeyay ayaa sheegay in dhibaatada ay sabab u tahay in gabadhan jirkeeda uu leeyahay unugyo dhaxal ah oo aan oggolaaneynin in la jiijiyo, kuwaasoo aan horay loo sii ogaanin.
Haweeneyda ayaase ka carootay in eedda dhankeeda loo soo celiyo, waxa ayna dacwad ka dhan ah dhakhaatiirta u gudbisay maxkamadda.
2020-kii, Yulia waxa ay u tartantay abaalmarinta taajka quruxda ee Mrs Russia-International, oo ah tartan caalami ah.
Kaalinta labaad ayay kasoo gashay tartankaas oo dhacay dalka Ruushka.
Yulia Tarasevich oo ah hooyo dhashay labo carruur ah ayaa sheegtay in dhowr xarumood oo caafimaad ay tagtay si qalliinno kale oo sixitaan ah loogu sameeyo balse uu wajiga ka hallaabay gebi ahaanba.
Ku dhawaad $30,000 oo doolar oo kale ayaa uga baxday isku dayga ay ku dooneysay in ay wajigeeda mar kale ku hagaajiso. Hadda ma awoodi karto in ay dhaqaajiso qaybo badan oo ka mid ah wajigeeda.
Dadka caanka ah ayaa inta badan sameysta qalliinka wajiga, iyagoo la dagaallamaya muuqaalka gabowga ee lasoo darsa marka ay da’dooda badato.
Previous article6 xeeladood oo caloosha lagu jaro, inta badan dadkuna aysan ogeyn
Next article5 arrimood qofka lagu arko waa in la iska ilaaliyo